Akhriso,Warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka oo la shaaciyey. – Xeernews24
Akhriso,Warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka oo la shaaciyey.
17. Juli 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka dambeysay afduubkii Internetka ee lagu sameeyey hay’adaha warbaahinta dowladda Qatar ee dhaliyey xiisadda ka aloolsan gacanka Carbeed ee khaliijshka.
Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakisha ayaa qoray in 24-kii bishii May la qabsaday wakaaladda wararka Qatar, kadibna lagu daabacay Hadallo loo tiriyey amiirka dalkaas Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani, oo uu ku ammaanayo Iran iyo ururka Xamas, kuwaasi oo qiil looga dhigtay in xidhiidhka loo jaro dalka yar ee Qatar.
Warbixinno ay soo ururiyeen sirdoonka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in madaxda Imaaraadka ay 23-kii May ka doodeen arrintan, si qiil loogu raadiyo in xidhiidhka loo jaro dalka Qatar xiisadna loo abuuri lahaa,
Si kastaba, warbixintu waxay sheegtay in weli aysan kala caddeyn in Imaaraadka ay si toos ah ugu dhaqaaqeen afduubkan internet, ama ay adeegsadeen shirkado u fuliyo, hase yeeshee ay caddahay in qorshahan ay ayagu lahaayeen.
Safiirka Imaaraadka Carabta ee Washington DC, Yousef al-Otaiba, ayaa si kulul u beeniyey in dalkiisa uu ka dambeeyey arrintan muranka dhalisay.
“Imaaraadka haba yaraatee wax lug ah kuma lahan afduubkan Internet ee la sheegay, balse waxaan shaki ku jirin in Qatar ay maal-geliso argagixisada” ayuu yidhi.
Geesta kale Waraysi uu shalay war baahinta siiye madaxwayna dalka maraykanku wuxuu si jees-jees ah uga hadlay arrinta wadama Carabta oo ku faanay in uu lacagta kaga dhamayn doono Muran iyo Khilaafyo aan macna lahayn.
Hoos ka daawo Hadalka Madaxwaynaha Maraykanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/07/je.jpg 170 297 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-07-17 08:56:342017-07-17 08:56:34Akhriso,Warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka oo la shaaciyey.
AKHRI: Maxaad ka Taqaan Taariikhda Masaajidka Weyn ee Isbaheysiga Yaase dhi... XASAASI: Maxay tahay Sababta Puntland Lacago badan loogu qoondeeyay Miisaaniyadda...